Ọkpụkpụ aka na-agba aka
Chawl neck bụ ihe ngwa ngwa ma dị irè. Ọ na-enwe ike ịchọta akwa uwe ahịa ma na-eji ejiji ya. Tụkwasị na nke a, ụmụ nwoke kwadoro na ịchafụ n'olu ahụ dị ezigbo njọ.
Ụdị nnụnụ ndị dị n'olu
Ụdị nchara nke ịchafụ n'olu bụ 40 cm site na 60 cm. Ma taa, a na-ewere ihe nkedo dịka 40 ruo 70 n'ogologo. A na-ekekọta ha ọ bụghị naanị n'olu, kamakwa n'isi, belt na, ọbụna, akpa. Ngwa dị otú ahụ na-achọ nwanyị mma, na-eme ka onyinyo ya dịkwuo nụcha ma sie ike.
Na mgbakwunye na nha ụcha ụmụ nwanyị nwere ike ịbụ ihe dị iche iche, ma ha niile bụ ihe anụ ahụ, nke ka ukwuu n'ime silk. Ihe maka ịchafụ ahụ nwere ike ịbụ:
silk na mmetụta.
Ụdị ndị a ma ama na-eji silk dị ka ihe ahụ, ọ dị irè, ọ na-egbuke egbuke na ọ na-agbakwụnye ihe mkpuchi na onyinyo nke okomoko niile. Na ihu igwe ọkụ, silk neckerchief ga-eme ka ị dị jụụ, na nke dị jụụ ga-eme ka olu gị dị ọkụ.
Ihe kacha mkpa bụ foto dị na ịchafụ. O nwere ike ịbụ kpochapụ - ihe ịchọ mma na etiti ma ọ bụ n'oge a. Uwe a na-agbanye n'ahịrị na agbụ n'olu nwere ụkpụrụ nke kwekọrọ n'ụdị ejiji, n'oge na-adịbeghị anya ọ bụ anụmanụ na-ebipụta - a zebra na agụ owuru. Ngwa ndị e ji eji ihe oyiyi na-atụ anya na-egosi na ọ bụ mgbe niile, ụcha dị mkpa maka ịchafụ na-adabere na agba agba nke onye na-emepụta ya.
Ọfụma dị mma n'olu maka ụmụ nwanyị anaghị adịkarị na monophonic, nke bụ ihe dị iche n'etiti ha. Ihe osise kacha mma nke nwanyi bụ okooko osisi, kukumba French, abstraction ma ọ bụ geometric shapes. Ọtụtụ okooko osisi ga-eme ka ngwa ahụ dị mma. Ọtụtụ ụlọ ọrụ a maara nke ọma na-emepụta mmekorita nke ụlọ ọrụ na-emepụta nke ụmụ nwanyị na-ejiji mara n'ụwa niile. Ihe atụ doro anya bụ Burberry a ma ama ama - ụcha ojii na-acha ọcha na-acha uhie uhie na agba aja aja maara nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla.
Dị iche iche ọ dị mkpa ịkọwa banyere ndị inyom na-ekpo ọkụ na-ekpuchi ndị Arab. Ha nwere usoro checkered, nke na-achakarị oji na nke na-acha ọcha, ma na-atụgharị n'akụkụ ya. Ọ bụghị onye ọ bụla maara ihe a na-akpọ headcarf? Nke a bụ arafatka. Ọ na-ewu ewu n'etiti ndị na-eto eto na oge okpomọkụ-oge. Arafatka dị mma na uwe T-shirt, jaket dị mfe, uwe elu.
Kedu otu ị ga - esi ahọrọ ụfụ ejiji n'olu gị?
Cervanto bụ ngwa mara mma, n'ihi ya, a ga-ahọrọ ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị na isi ya. Na ị na-ahọrọ ihe ejiji, ihe niile dị ezigbo mkpa:
Tụkwasị na nke ahụ, ọ bara uru ịtụle ụdị na nhacha nke mkpuchi na uwe akwa na ụdị uwe. N'okpuru uwe ahịa ma ọ bụ akwa mkpuchi mara mma, ọ ka mma ịhọrọ obere ịchafụ gburugburu n'olu gị na agba mgbochi ma kee ya na eriri French. Jiri aka na-ehicha aka n'olu gị ma kee onwe gị ụta dị n'akụkụ, mgbe ahụ ihe oyiyi gị ga-adị na French, nụchaa ma nwee obi ụtọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ itinye nkedo maka nzukọ azụmahịa dị mkpa, keezie ngwa ahụ n'ime eriri ọnụ. N'okwu a, ụkpụrụ ahụ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla, ihe bụ isi bụ na agba kwesịrị iji anya gị na ntutu gị. Maka eriri ọnụ, ọ ka mma ịhọrọ ogologo oge dị warara. Ma ọ na-ele anya ka ọ dị mma.
Maka uwe ndị ọzọ nke onye kwuo uche ya, ọ bara uru ka ị na-ewere ihe nkedo na-adọrọ adọrọ gburugburu n'olu gị ma kee ya na njedebe. N'okwu a, ịkpụ na jaket ma ọ bụ ejiji adịghị mkpa. Ọ bụrụ na ị na-etinye na jaket ma ọ bụ jaket, mgbe ahụ ngwa ahụ kwesịrị ịdị na-acha ọkụ ma ọ bụ na-agba ọchịchịrị. Ihe nkedo ahụ ekwesịghị ịbụ nke na-egbuke egbuke ma ọ bụ dị iche iche na agba, ma ọ bụghị na ọ gaghị ekwekọ na uwe ahụ, ọ ga-anọpụ iche. Ọzọkwa, ejikọtala ihe nkedo na ihe nwere nkọwa ndị ọzọ, ọ ga-eme ka ọ gbasaa.
Angel na-esi ísì ụtọ
Ihe ịchọ mma - ihe na-egbuke egbuke
Ụmụaka na-ahụ ìhè Sunlight
Kedu otu esi echekwa ugogbe anya maka uzo site na ụdị nchedo?
Osisi na nkume mgbachi
Sakam n'otu uzo
Igwe a na-emepụta
Ileba anya maka iko - ihe eji eme ihe maka umu nwanyi nke ejiji
Osimiri dị ọcha nke dị n'ụwa, nke a na-enweghị ike itinye
Osimiri nke South Korea
Ihe ịtụnanya nke afọ ime maka ụbọchị ọmụmụ Kim Kardashian
15 foto na-adọrọ mmasị nke elu igwe
Gini mere nkịta ji eri?
Na-agbawa n'uwe 2016
Egwuregwu gburugburu ebe obibi maka ndị na-eto eto
Morija Museum na Archive
Kedu uru bara apụ apụl?
Ejiri akpụkpọ ụkwụ - ihe ị ga-eme?
Ọ naghị ebipụta ngwa nbipute - gịnị ka m kwesịrị ime?
Akpụkpọ ụkwụ - mgbụsị akwụkwọ 2015
Ejiji ọla edo 2016